I Kimpa Vita (izay atao hoe Kimpa Mvita, Tchimpa Vita, Dona Beatriz na Beatriz Kimpa Vita) dia mpaminanivavy kôngô, mpanorina sady nitarika ny fihetsiketsehana ara-pivavahana antônianista, izay fifangaroan' ny katôlisisma sy ny fivavahan-drazana tao Kôngô. Teraka tao Mbanza Kongo (ao Angôla ankehitriny) izy tamin' ny taona 1684 ary maty tao Evolulu (ao Angôla ankehitriny) tamin' ny 2 Jolay 1706. Nitolona ho an' ny fampitambarana ny fanjakan' i Kôngô izay tsy nisy fitondrana tafaorina fa tsy nilamina izy. Voaheloka ho faty izy ary maty tamin' ny fandorana azy velona. Isan' ireo olona niaina tamin' ny morontsiraka atlantikan' i Afrika tamin' izany fotoana izany izay betsaka nanoratra izy: gazety, tatitra ary taratasyn' ny misionera kapotsinô italiana niasa tamin' izany faritra izany (Luca da Caltanisetta, Marcellino d'Atri, Bernardo da Gallo ary Lorenzo da Lucca).
1.2 Ninoan' ny mponina ho nganga marinda
1.3 Ny fampianaran' i Kimpa Vita
1.4 Fandoroana velona azy
2 Ny akon' ny asan' i Kimpa Vita taty aoriana
Teraka teo anelanelan' ny taona 1684 sy 1686 tao amin' ny fianakaviana maro anaka tao amin' ny andriana kôngô i Kimpa Vita. Natao batemy tamin' ny fotoana tsy fantatra izy (mety pretra safiotra avy ao Angôla no nanatanteraka izany, i Luis de Mendonça). Tamin' ny fotoanandrony dia Katôlika ny ankamaroan' ny vahoaka tao amin' ny fanjakan' i Kôngô, tamin' ny taonjato faha-15 mantsy dia efa nanomboka ny fampielezana ny vaovao mahafaly tao amin' io faritra io, ka efa natao batemy i Nzinga Nkuwu (na i Nzinga a Nkuvu: mpanjaka kôngô niova ho kristiana voalohany) izay novana anarana hoe João I do Congo. I Kimpa Vita dia nitombo tamin' ny vanimpotoan' ny ady an-trano nandravarava tao amin' ny fanjakan' i Kôngô, izay reraka noho ny fifanandrinana tsy nanam-pitsaharana tamin' i Pôrtogaly (ady tao Ambuila na Mbwila) sy tamin' ny foko mpifanolo-bodiridrina sasany.
Ninoan' ny mponina ho nganga marinda[hanova | hanova ny fango]
Hatramin' ny fahatanorany dia ninoan' ny mponina ho nganga marinda (mpanelanelana ny olombelona amin' ny tontolon' ny fanahy) izy; nofanina tao amin' ny fikambanana miafina ata hoe kimpasi izy. Ny kimpasi dia nanana andraikitra famitana iraka ny hanafaka ny olona amin' ny herin' ny ratsy amin' ny alalan' ny famoahana fanahy ratsy atao hoe mbumba kindonga.
Nisy akony tamin' i Kimpa Vita ny fanambaràn' i Appolonia Mafuta "Fumaria" mpaminany teo alohany, izay nanambara mialoha ny famaizan' Andriamanitra ka nandehandeha niaraka tamin' ny vato izay ambarany fa ny lohan' i Kristy nosimbain' ny haratsiam-panahin' ny olombelona. Nonomboka tamin' ny taona 1703 na 1704 dia nilaza ho nandray fanambaràna i Kimpa Vita ka nilaza fa hosazian' Andriamanitra ny mponina ao amin' ny fanjakan' i Kôngô raha tsy mitambatra indray, ka i São Salvador no tokony hatao renivohitra. Naheno izany hafatra izany ny mpanjaka Pedro IV (na Pedro IV Nusamu a Mvemba) nefa tsy nikasika azy.
Etsy an-daniny dia maro ireo andriana kôngô nanohana azy ka isan' izany i Hipolita vadin' i Pedro IV sy i Pedro Constantinho da Silva, iray amin' ireo jeneraly tao amin' ny tafiky ny mpanjaka, ary maro ireo izay tonga niorim-ponenana niaraka amin' i Kimpa Vita tao São Salvador, teo amin' ny toerana nisy ny sisam-paharavan' ny katedraly taloha.
Ny fampianaran' i Kimpa Vita[hanova | hanova ny fango]
Nampianatra i Kimpa Vita fa i Jesoa sy ireo mpianany ary olona maro resahina ao amin' ny Baiboly dia mainty hoditra ary ny ankamaroany dia Bisy Kôngô (Bisi Kongo). Ny mpanjaka António I (na Nvita Nkanga, amin' ny teny kikôngô) dia tokony ho heverina ho "mesia", ary i Kimpa Vita tenany dia nilaza tena ho itoeran' ny fanahiny. Nisy nilaza fa maty isaky ny Zoma izy ary mitsangan-ko velona isaky ny Alahady rehefa avy nihaona amin' Andriamanitra mandritra ny roa andro. Novan' i Kimpa Vita ny vavaka katôlika sasany, indrindra ny "Ave Maria" sy ny "Salve Regina", izay novany hoe "Salve Antoniana".
Fandoroana velona azy[hanova | hanova ny fango]
Sarivongan' i Kimpa Vita
Nantsona hoe antônianisma (antonianismo amin' ny teny pôrtogey) izany fihetsiketsehana izany ary Antôniana ireo mpanaraka azy; nanana misionera izay nampiely ny foto-pampianarany tao amin' ny faritra hafa ao amin' ny fanjakan' i Kôngô izy. Ekeny ny fahefan' ny papa nefa halany ny misiônera eorôpeana, izay niasa indrindra tamin' ny morontsiraka atlantika. Nanahy ny amin' ny fahombiazana azon' io fihetsiketsehana antônianista io i Pedro IV ka nampisambotra azy sy nanameloka azy hodorana velona miaraka amin' ny zanany tamin' ny taona 1706, taorian' ny fitsarana azy ho mpampanao fampianaran-diso (herezia), teo anatrehan' ny fitsarana sivily izay nahitana an' ireo misionera kapotsinô mpanolotsaina, dia i Bernardo da Gallo sy i Lorenzo da Lucca.
Rehefa avy nanambara ny fahotany izy dia nodorana velona tamin' ny 2 Jolay 1706, tao amin' ny tanànan' i Evolulu (any Angôla), ao akaikin' i Mbanza Kongo, niaraka tamin' ny vadiny sady "anjely mpiambina" azy João Barro. Ny zanak' izy ireo dia voavonjy noho ny fanelanelanana nataon' ny mompera Lorenzo da Lucca (izay nampanao kônfesy farany azy ireo) teo amin' ny mpanjaka. Nomen' i Lorenzo anarana hoe Jerónimo ity zaza ity fa tsy nampanarahina ny fanirian-dreniny hanome azy ny anarana hoe António.
Ny akon' ny asan' i Kimpa Vita taty aoriana[hanova | hanova ny fango]
Na dia resy aza ireo mpianayr' i Kimpa Vita tamin' ireo taona manaraka (resin' i Pedro IV tamin' ny taona 1709 i Pedro Constantinho da Silva), ny antônianisma dia nitohy ihany taorian' ny fahafatesan' ilay mpanorina azy. Niady tamin' ny antônianisma ny misiônera katôlika tamin' ny taonjato faha-18 sy faha-19.
Ny mesianisma kôngôley sy angôley tamin' ny taonjato faha-20 (dia ny matsoanisma sy ny kimbangisma ary ny tôkôisma), izay mbola velona ankehitriny dia mampahatsiaro hatrany ny amin' i Kimpa Vita izay antsoina indraindray hoe "Jeanne d'Arc kôngôley" (frantsay: "Jeanne d'Arc congolaise") noho ny fifanahafan' ny zontram-piainany sy ny an' i Jeanne d'Arc izay nodorana velona tao Rouen tamin' ny taona 1431. Ny oniversiten' i Uíge ao Angôla dia nomena ny anarana hoe "Universidade Kimpa Vita" (UNIKIVI) nanomboka tamin' ny taona 2009.
↑ Nanohitra ny fivavahana katôlika ity mpanjaka ity taty aoariana.
↑ I Pedro Constantinho da Silva dia andrianahy tao amin' ny fanjakan' i Kôngô.
↑ Nalain' i Pedro IV indray ho fananany i São Salvador tamin' ny taona 1696, nefa nilaozany izany taty aoriana noho ny fatahorany ny mety hisian' ny fanfihan' ny mpanjaka tao akaikiny.
↑ I Rouen ankehitriny dia kaominina ao amin' ny tapany avaratra-adrefan' i Frantsa izay andalovan' ny renirano Seine.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimpa_Vita&oldid=1010319"
Voaova farany tamin'ny 26 Martsa 2021 amin'ny 06:34 ity pejy ity.